ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): January 2013
ကိုယ်ပိုင် Flash Ebook လေးလုပ်ကြမယ် Ncesoft Flip Book Maker v2.8.1
Serial Key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 10:19 PM 1 comment:
Android usb Drivers တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ အဆင်ပြေပြေဒေါင်းယူနိုင်အောင် စုစည်းပြီး
မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Samsung , HTC , Sony Ericsson , Huawei , LG , Motorola စတဲ့ နာမည်
ကြီး Burn တွေအပြင် စုစုပေါင်း Android Hand Set 12 မျိုး အတွက် Driver တွေကို မျှဝေပေးထားပါ
တယ်ဗျာ။ အောက်မှာ ကိုယ်အသုံးတည့်မယ့် Driver ကို ရွေးခြယ်ပြီးဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်နော်။
credit to - ပြည့်ဖြိုး (ပြည်)
Labels: Android, Driver
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:17 PM No comments:
ကျနော်ဆိုဒ် နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော www.adusa.us မှာ မူရင်း Website မှခဏတာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသဖြင့် Download လုပ်ခြင်းများ အခက်အခဲများ ရှိနိုင်သောကြောင့် သည်းခံပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။
နေ့စဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို အစဉ်လေးစားလျှက်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 3:32 AM No comments:
Advanced SystemCare Pro v6.1.9.221 (Portable) + Serial
Advanced System Care Pro v6.1.9.221 (Portable) တဲ့ဗျာ အသစ်ထွက်လာပြန်ပြီ
ဦးဦးဖျားဖျား တင်တာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဗျ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာလေးက
Portable Version လေးပါ။ Portable ဆိုတော့ Double Click နှိပ်ပြီးသုံးရုံပါဘဲ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Serial Key ပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Serial Key ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Internet Connection ကို
ပိတ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ ဒီ Software ကိုအရှေ့က Post တွေမှာလည်းရှင်းပြထားခဲ့တော့ အခုမ
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 9:00 PM No comments:
Twitter အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးကို စမ်းသပ်ပြီးအသုံးပြုချင်သူများအတွက် မြန်မာဘာသာ
ပြန်စာအုပ်လေးအဖြစ်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာတော့ တင်ထားတာ မတွေ့
သေးပါဘူး။ Twitter ကလည်း Facebook လိုဘဲ လူမှုကွန်ယက် Website တစ်ခုပါ။ Twitter ကိုအသုံးပြုသူ
တွေနဲ့ သူတေသနပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ Twitter ဆိုတာ စီးပွားရေးဈေးကွက်အတွက် မဟာဗျူဟာစီ
မံချမှတ်ဖို့ ပိုသင့်တော်ပြီး Facebook ကတော့ ပုဂ္ဂလိက ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမျှဝေတဲ့အခါမှာပိုပြီး
ကောင်းတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်ဗျာ။ စာအုပ်ထဲမှာလည်း Account ဖွင့်နည်းကစပြီး အသုံပြုပုံအဆင့်ဆင့်
ကိုပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားလို့ Beginner များကစပြီး လေ့လာနိုင်တဲ့စာအုပ်လေးပါ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 7:13 PM No comments:
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ Data တွေကို ပြန်လည်ရယူဖို့ Recovery
ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Softwareလေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဆိုတာက မှား
ဖျက်မိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် Virus ကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်သွား/ပျက်သွားတဲ့ Data တွေကို ပြန်လည်ရယူပေး
နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်းဘဲဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ Auslogics
က Software တွေကိုဘဲ တင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Crack File ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:14 AM No comments:
ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် Speed ကို ပိုမိုမြန်ဆန်အောင်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ Software
တစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ PC ရဲ့ Speed တင်မကပါဘူး Internet Connection ရဲ့ Speed ကိုပါ
မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဘဲလားဆိုတော့လည်း ဒါတင်မကသေးပါဘူး Disk , Registry , Borwser ,
Memory , စတာတွေကို Clean လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ PC System ပိုင်းတွေကို Maintenance လုပ်ရာမှာ
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Tools တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသုံးကြည့်ရင် ဒီထက်ပိုတဲ့
Feature တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Crack ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Crack
ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Antivirus ကိုပိတ်ထားပေးပါနော်။ အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာရှင်း
Auslogics BoostSpeed - the popular tool to speed up Windows, programs and Internet connection from the company AusLogics. The program optimizes computer memory, accelerates loading Windows, improves performance Microsoft Office, The Bat, FireFox, Opera, Skype, cleans the registry and disk. The fourth version of the program includes the famous Auslogics Disk Defrag, andaset of new tools for today's computers. After defragmenting the registry BoostSpeed, speed of the computer will increase by reducing the fragmentation of the registry files, reducing their size, as well as by eliminating errors in the registry. In addition, this program offers powerful cleaning registry and disk, which in turn will allow your computer to work more quickly and efficiently. Hasanice user interface and support for Russian language.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:52 PM No comments:
Labels: Maintenance, Recovery, Software
Hard Disk ကို Defragments လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်
ပါတယ်။ Hard Disk ရဲ့ FAT 16/32 Format နဲ့ NTSF System တွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်
ဗျာ။ Disk Defragmenter ဆိုကတည်းက လူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့
ပါဘူးနော်။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Serial Key ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
uslogics Disk Defrag Pro - the professional version of the compact and fast defragmenter that works with both FAT 16/32, and with the NTFS file systems. The program usesaseries of algorithms that optimize and manage files on your hard drive, defragment the file structure and speed up applications and Windows.
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:40 PM No comments:
မြန်မာဘာသာပြန် နည်းပညာ Ebook များစုစည်းမှု (အတွဲ-6)
မြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ နည်းပညာစာအုပ်များကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်း ဒေါင်းယူနိုင်
အောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုအပိုင်း (6) မှာတော့ နည်းပညာစာအုပ်တွေချည်းဘဲစုစုပေါင်း
24 အုပ်ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာတွေလည်းတော့မပြောတော့ဘူးနော်။ အစုံဘဲ သိချင်ရင် ဒေါင်းကြည့်
ကြပေါ့နော်။ မကြာခင်မှာလည်း အပိုင်း(7) ကို ဆက်လက်ပြီး တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းပိုင်ရှင်
ကတော့ ညီငယ်လေး IT Helper ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:14 PM2comments:
ကိုပြည့်ဖြိုးရေ.. ညီလေးကို skype software ကို နောက်ဆုံးထွက်ကိုဖူးဗားရှင်းနဲ့ လိုချင်ပါတယ်။
Gmail ကနေပြီး တောင်းထားလို့ အခြားသောလိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်းဒေါင်းယူ
နိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ Full Version လို့ပြောတယ်ဗျာ Skype မှာ Full Version
ရယ် License Version ရယ်လို့မရှိပါဘူး။ Skype ကတော့Free Version ပါဘဲ။ ငွေဖြည့်ထားရင် Skype
to Phone ခေါ်နိုင်တာနဲ့ ငွေမဖြည့်ထားရင် Skype to Skype ဘဲခေါ်နိုင်မှာပါ။ ဒါလေးဘဲကွာတာပါ
ကျန်တာအားလုံးကအတူတူပါဘဲ။ အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 1:17 AM No comments: